”Ma aha sida aad wax u qorshaynayso!” – 9-ka Wasiir ee sawirka ka muuqda 3 waa la cayriyey, 3 waa dhinteen, halka 3 ay la dheceen xukuumadda (Qoraal micne xambaarsan) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Ma aha sida aad wax u qorshaynayso!” – 9-ka Wasiir ee sawirka...
”Ma aha sida aad wax u qorshaynayso!” – 9-ka Wasiir ee sawirka ka muuqda 3 waa la cayriyey, 3 waa dhinteen, halka 3 ay la dheceen xukuumadda (Qoraal micne xambaarsan)
(Hadalsame) 19 Okt 2020 – Waa 2017-kii. Waa sagaal Wasiir oo garbaha isku haya oo ka mid ah Xukuumad uu markaa uun Baarlamaanku kalsooni siiyay laguna hor dhaarinayo.
Sagaalka Wasiir ee sawirka ka muuqda, saddex ka mid ahi waa ay geeriyoodeen. Allah ha u naxariisto.
Saddex waa laga saaray Golaha
Saddexna waxay ka mid noqdeen Xukuumaddii uu Baarlamaanku kalsoonida kala noqday Bartamihii 2020, iyaga oo kala qeybsan oo qaarna ay ridayaan Golihii ay ka tirsanaayeen, qaar laga tiro batayna ay is leeyihiin daafaca.
Sagaalka Wasiir ee garbaha isku hayay, ku socday qorshaha Xukuumaddu, dariiqyada aan qaar ka soo noqoshada lahayn ee ay mareen, midna kuma fekereyn maalintaas.
Haddii uu magacaagu ka soo dhex muuqdo Golaha Cusub ee la sugayo, qorshe la’aan ha noqon. Laakiin qorshahaagu yaanuu ku koobnaan sida aad jeclaan lahayd oo keliya.
Waxaa Dhigay: Yuusuf Garaad
Previous articleTOOS u daawo: AS Roma vs Benevento, Leicester City vs Aston Villa – LIVE (Shaxda Sugan)
Next article5 qodob oo muujinaya inay khalad tahay in QAADKA Itoobiya la fasoxo midka Kenya-na la xannibo